6 Hogaamiye Oo Ku Nool Hodantinimo Qaali Ah Iyo Nolol Tii Sarraysay Shacabkooduna Gaajo U Dhimanayaan Daqiiqad Kasta — Q:2aad | FooreNews
Home Barnaamijo 6 Hogaamiye Oo Ku Nool Hodantinimo Qaali Ah Iyo Nolol Tii Sarraysay Shacabkooduna Gaajo U Dhimanayaan Daqiiqad Kasta — Q:2aad
6 Hogaamiye Oo Ku Nool Hodantinimo Qaali Ah Iyo Nolol Tii Sarraysay Shacabkooduna Gaajo U Dhimanayaan Daqiiqad Kasta — Q:2aad
FoorenewsNov 09, 2017Barnaamijo, Sheekooyin, Suugaan0
3. Robert Mugabe – Zimbabwe
Madaxweynaha waddanka Zimbabwe Robert Mugabe oo lagu sheego in uu yahay Madaxweynaha ugu da’da weyn madaxweynayaasha wakhtigan ka taliya dalalka adduunka ayaa waxa la sheegaa in uu yahay nin ku nool nolol aad u sarraysa oo waalli ah wakhti dalkiisa Zimbabwe lagu tiro mid ka mid ah dalalka adduunka wakhtigan ugu saboolsan iyada oo ay sannad walba kumannaan qof oo dalkaasi u dhashay u le’daan una dhintaan gaajo, biyo la’aan, cudurro iyo saboolnimo baahsan. Waxa uu dadkiisa xukumayay tan iyo 1987-kii. Isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisu waxa ay ku caan baxeen ku noolaanshaha nolol xad-gudub ku ah dadkooda oo ka badbadin ah. Guryaha fiillooyinka ah ee aan is aqoon, gaadiidka ugu qaalisan, hantida baananka u taalla iyo agabka ay mar walba iibsadaan ee warbaahintu qortay ayaa ah wax aan la qiyaasi Karin.
Haweenayda uu qabo ee Grace Mugabe waxa la sheegaa in wax kaleba iska daayoo ay hal far-gashi oo dheeman siisatay in ka badan Hal Malyan oo Doollar. Xafladaha gaarka u ah ee ay qabsadaan isaga iyo xaaskiisu waxa ku baxaya Malaayiin Doollar waxaana sidoo kale xusid mudan in sannadkii 2016 uu Madaxweyne Mugabe ku iibsaday diyaarad yar oo kuwa raaxada ah oo isaga u gaar ah lacag ka badan dhawr iyo Toban Malyuun oo dollar. Safarrada ay dibadaha ku tagaan xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaa la sheegaa in ay ku baxdo malaayiin dollar iyo oo waliba guryo qaali ah ka dhista meelo badan oo dalalka adduunka ah. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in 72% shacabka waddanka Zimbabwe ay yihiin sabool oo maalintii qofkiiba ku nool yahay wax ka yar Hal Dollar.
4. Teodoro Mbasogo- Madaxweynaha Equatorial Guinea
Madaxweynaha waddanka Equatorial Guinea ee isla qaaradda Afrika ayaa isna soo galaya Madaxweynaha dadkiisa oo bakhtiyaya sida xun ugu tagri fala hantidooda waxaana la sheegaa in uu yahay mid dhiigga umaddiisa ku tadhahay oo aan u nixin si kasta ama xaalad kasta oo shacabkiisu ku sugan yahay halka uu isagu ku nool yahay nolol aanay ku noolayn madaxda dalalka hore u maray. Teodoro Mbasogo waxa uu dalkiisa Equatorial Guinea soo maamulayay tan iyo 1979-kii isaga oo wakhtigaasi xukunka ka tuuray nin adeer u ahaa.
Isaga iyo qoyskiisu waxa ay ku nool yihiin nolol tagtay ka badbadin ah halka shacabka dalkiisu maalin walba gaajo iyo cudurro ugu dhintaan kana mid yihiin shucuubta adduunka ugu saboolsan. Inkasta oo dalkani hodan ku yahay shidaal haddana waa mid ka mid ah madaxweynayaasha isaga iyo qoyskiisu dalkaasi iska yeesheen oo hantidooda sida ay doonaan ugu tasarufa. Dharka uu xidho oo kali ah waxa la sheegaa in uu u habeeyo (Design) nin Faransiis ah oo ku qaata dhawrkii sanaba in ka badan 20 Milyan oo dollar. Sannadkii 2006 waxa la xaqiijiyey in uu guri qaalli ah ka iibsaday Gobolka California ee dalka Maraykanka gurigaasi oo qiimihiisu dhan yahay 30 Malyuun oo dollar. Xaaskiisa iyo caruurtiisu waxa ay guryo ka iibsadaan dalalka dibadda, macdano qaali ah, gaadiid qaali ah iyo lacago baananka dibadda ay dhigtaan ayay ku caano maaleen.
Previous PostWajiga Qarsoon Iyo Xiisaha Ku Duuggan Taariikhda Saddexda Murashax-Madaxweyne Ee Somaliland- Sooyaalkooda Taariikheed, Da’dooda, Aqoontooda, Khibradooda Shaqo, Hiwaayaddooda Iyo Shakhsiyadda Dhabta Ah Ee Mid Kasta Next PostGuddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka Ah Ee UCID Oo Weerar Qaawan Ku Qaaday Ismaaciil Hurre Buubaa, Kuna Tilmaamay Inuu Kaw Ka Yahay Raggii Dagaalkii Sokeeye 1994-Kii Somaliland Ka Riday